Mageia 2 ayaa la daabacay | Laga soo bilaabo Linux
Mageia 2 ayaa la siidaayay
Iyada oo xoogaa ikhtiyaar ah iyo u hogaansanaanta taariikhda la siidaayo, ayaa la siidaayay Mageia 2, fargeeto ah Mandriva. Noocaan cusub waxaa ka mid ah bay'adaha desktop-ka:
Iyo maareeyayaasha daaqadaha kala duwan sida:
Waxaa ka mid ah codsiyada muuqda ee aan helno:
Firefox iyo Thunderbird ESR (Sii deyn Taageero Dheeraad ah 10.0.4)
Xarunta Warbaahinta XBMC 11
Waxay kaloo leedahay Linux Kernel 3.3.6.
Si aad u soo dejiso sawirada ISO kaliya raac xiriirka hoose: Soodejiso Mageia 2. Waxaan kuugu hambalyeynayaa Mageia sii deynta weyn;).
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Mageia 2 ayaa la siidaayay
36 faallooyin, ka tag taada
Sug z CirbadQt? Miisaska buuxa? OO Haddii kale, waxaan ku soo dejinayaa nooca 'LXDE', oo aniga igu habboon.
Taasi waa sax, buuxi 😉
Waxaan u maleynayay inaysan wali dhameystirneyn wali, soo dejineyso si aan u tijaabiyo ... Waxaan arkaa inaysan jirin noocyo u gooni ah, markaa waan soo dejinayaa ama Gnome ama KDE waxaan filayaa ...?
Sikastaba waan joogay ... waxaan qabaa inay u qalanto dhadhan yar 😀
weydii, mandiil-qt wuxuu la yimaadaa eggwm ama sanduuq furan, haddii uu keeno eggwm waxay mudan tahay isku day
Ma keenayo labada midkood, waxaad isticmaali kartaa Maamulaha Daaqad kasta, in kasta oo badanaa loo adeegsado Openbox, Compiz iyo KWin.
waa inaan fahmay in mandiil-qt uu weheliyo eggwm (oo isna qt ku jira) laakiin isla markaa waxay la socotaa sanduuqa furan (taas oo aan ahayn bedel xun sidoo kale)
Waxaa sidoo kale lagu ordi karaa xammeetida (Gnome)
Razor-Qt waa sida dulinka oo kale, wuxuu ku dheggan yahay wax kasta oo xD ah
Waxaan xiiseynayaa inaan isku dayo Chakra, laakiin waxaan ka baqayaa inaan khalkhal geliyo nidaamka.
Ma dhici doonto inaadan jeclayn oo aad siiso sudo pacman -Rsn XD. Dhab ahaan, i rumee ma jiro hab ka fiican oo lagu tijaabiyo mandiil marka loo eego kan chakra ;-), 0 dhibta oo aad u ammaan ah.
Marka loo eego barta Mageia waa Xfce 4.8.3.
Ugu dambeyntiina waa soo baxday. 🙂
Fuck the Mageia guys, hada waxaan dhameeyay soo dejinta fucking 4 GB iso of mageia 1 hadana waxay la soo baxeen nuuca ay ku siinayaan, waxaan idhi, waxaan ku dhajin doonaa mandriva
Waad iska fuudhay naftaada, inaadan ahayn "qabow" 😛
Maya maya maya ma ihi qabow waxaan u muuqdaa baaritaanka Perseus iyo distros test
Adigoon rabin inaad olol dhaliso, miyaad horeyba u ogaatay xisaabinta 7-dii maalmood ee ugu dambeysay ee DistroWatch, Mageia waxay u muuqataa booska labaad? hehe, taasi waxba maahan, gacaliyahayga Chakra wuxuu ku jiraa booska 14, in kastoo aanan runti rumaysanayn saxnaanta boggan, haddii ay tahay mid xog-ogaal ah.
Muxuu kugu wargalinayaa?
In badan ayaa riixday xiriirka Mageia xD
Xog badan kadib: P.
Arrinta la yaabka leh ayaa noqon doonta inaysan ku jirin boosaska ugu horreeya (akhri qodobkan si aad u fahamto sababta).
Waxay ahayd iyada oo loo marayo DistroWatch oo aan ka bartay tirada badan ee kala-baxayaasha jira, iyo astaamahooda. taasi waxay igu kaliftay inaan tijaabiyo qaar ka mid ah, qaar xiiso leh, qaar kalena, feker ahaanteyda, aafo !!!!! Hahaha
In la ogaado qaybinta cusub waa bog aad u fiican.
Waxaan ka helay maqaal ku xiran tixraaca soo socda oo aad u xiiso badan:
Ku jawaab Ersdol
Waxaan u arkaa in faalladaadu ka xiiso badan tahay qoraalkaas ¬¬
Xiisad darteed, waxaan soo degsaday sawirada tooska ah (kuwaas oo kaliya laga heli karo jawiga gnome iyo kde) iyo, waxaan layaabay - filashooyinka la soo saaray awgood - waxay umuuqdaan kuwo laga naxo. Sawirada tooska ah ma socdaan. Shaashadda guriga waxay muujineysaa nidaamka nidaamka iyadoo loo marayo muuqaalka kubbadaha ku jira astaanta mageia. In kabadan 10 daqiiqo shantii goobood ayaa soo muuqday. Waxaan idhi, "Ugh, ugu dambeyn", laakiin maya, maxaa yeelay ka dib (waxaan sugay 10 daqiiqo oo kale) waxba. Miiska dhintay.
Waa maxay niyad jab!
Miyaad ku duubtay USB-ga? hadday saas tahay, waa inaad ku sameysaa sawir gacmeed kaas oo loogu talagalay OpenSUSE, Chakra iyo Windows, sababtoo ah Unetbootin ugu yaraan Mageia 1 kuma aysan shaqeyn barnaamijkaas.
Waan jiifsanayaa, si sax ah, unetboothinka si aan sawirka ugu keeno USB-ga. Uma maleyneynin inay tani dhibaatadu ahayd. Xaqiiqdii, haddaad sheegto, isla waxbaa igu dhacay aniga kahor xilli aan doonayay inaan isku dayo OpenSuse.
Waad ku mahadsantahay digniinta. Hadda waan arki doonaa haddii ay jiraan sida loo isticmaalo sawir-qoraha ka Debian.
Xaqiiqdii, markay kuu sheegaan in dhibaatadu timaaddo habka loo duubo USB-ga, waxaad isku dayi kartaa inaad adeegsato barnaamij kale oo noocan ah sida nidaamyo badan ama kuwa la mid ah, ama aad si fudud ugu baahato amarka dd.
Qoraa midkoodna ama midna, sida Rayonant kuu sheegayo:
Waad ku mahadsantahay xogta taliska dd. Runtu waxay tahay anigu ma aanan ogeyn maxaa yeelay ma aanan codsan, sababtoo ah unetboothin marwalba sifiican ayey aniga ila shaqeynaysay.
Waanu isku dayi doonaa…
PS: Faallooyinkeygii hore waxaan si kadis ah u cunay dhowr astaamo. Fikraddu waxay ahayd in la yiraahdo:
"Waad salaaman tihiin.
Waan qabtay ... »
Waa kan casharka 😉
Waxaan ku xaqiijinayaa in amarka dd aad ka sameyn karto USB nool oo si buuxda u socda.
By the way, wax aad u fiican oo hufan Mageia 2. Ma aanan isku dayin wax badan, laakiin waxaad u sheegi kartaa inay dadaal badan geliyeen sameynta soo bandhig aad u wanaagsan.
Sidoo kale waan niyad jabay maadaama aan doonayay inaan iskudayo xitaa qaab toos ah. Isla waxbaa igu dhacay, kaliya, ma garanayo inay ugu xun tahay, waxaan si toos ah uga duubay muuqaalka tooska ah CD caadi ah waxbana haba yaraatee. Nidaamku wuxuu buuxiyaa astaanta Mageia ka dibna wuu dhintaa. Waxaan sugayay nus saac iyo waxba, kama dhicin halkaas.
Waxaan u maleynayay in sawirka la musuqmaasuqay, laakiin hubinta wadarta way fiicnaayeen. Ka dib waxaan la soo degay sawirka laakiin jawiga kale ee desktop iyo markaan bilaabayba isla sidii saxda ahayd ayaa dhacday. Waan hubiyey khaladaadka oo waxaan ku sameeyey wixii ay soo jeedinayaan halkaas laakiin waxba. Waxba.
Hadday taasi bilow tahay, aakhirka siduu noqon doonaa? Munaasabad kale waxay noqon doontaa ...
Ku jawaab Zrimar
Isla arintaas ayaa dhacday ayaan filayaa faahfaahsan oo leh Mageia 1… wali maanaan tijaabin Mageia 2.
Si aan u noqdo qof daacad ah, ma aanan tijaabin fadhiga tooska ah, si toos ah ugu rakib VirtualBox :(.
Baro inaad noqoto sayidka sayidka ee suuq geynta
LDD: Puppy Linux 5.3.3 ayaa la heli karaa